ဘဝမှတ်တိုင်: BS Player နဲ့ မြ၀တီ ရုပ်မြင်သံကြား ကြည့်ရအောင်
Android /Tablet ဖုန်း ကိုင်ဆောင်ကာ BSPlayer v1.27.189 APK အသုံးပြုလိုသူများအတွက် နောက်ဆုံး Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ player ပါ. ယခု player ဖြင့် မြ၀တီလိုင်းကို ကြည့်ရှု့နိုင် ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဖြင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ VLC player ဖြင့် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ အခုကတော့ Android ဖုန်းဖြင့် ကြည့်မည့် သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 10.5 MB ရှိပြီး Android Version 2.3 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ ဖုန်းများမှာထည့်သွင်း install လုပ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မြ၀တီ Online Media Link ထည့်နည်း
1. BS player ကို ဖွင့်လိုက်ပြီး အပေါ်ဖက်က "Open URL" ကို နှိပ်ပါ။
2. မြ၀တီရဲ့ online media link ဖြစ်တဲ့ http://www.myawaddy.net.mm/mwdlive လိပ်စာ ကိုထည့်လိုက်ပါ။
3. ပြီးလျှင် OK ကိုနှိပ်ပါ။ ခဏလောက် စောင့်ပေးလိုက်ပါ။
4. မြန်မာပြည်က 3G လိုင်းရတဲ့ နေရာမှာ ဆိုရင် ခဏလေးနဲ့ မြ၀တီရုပ်မြင်သံကြား ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
2G ပဲ ရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ ခဏလေး သီးခံစောင့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ကနေ DL လုပ်မည့် အချိန် အခိုက်အတန့်တော့ စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော်တော်များများ မြို့ကြီးတွေမှာ 3G ရနေပါပြီ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 4/08/2016 04:06:00 am